Tsy any ange ny olana e !
Fanovana sy fikitikitihana tsy hitondra mankaiza. Ny telo taona voalohany hidirana an-tsekoly, atao amin’ny tenin-dreny ny fampianarana. Tsy hampiakatra ny lentan’ny fampianarana eto Madagasikara ny fanapahan-kevitra tahaka io. Anisan’ny paikady lehibe nambolen’ny mpanjakazaka an-tanin’olona teto ny fampidirana ny teniny hoenti-mampianatra ny zaza malagasy any an-tsekoly… Satria fantatr’izy ireo tsara fa raha mianatra amin’ny teniny (tenin-dreny, teny malagasy) ny olona iray, hahay. Ho sarotra ny manambaka ny olo-mahay ! Mety ho lasa lavitra noho izy (mpanjakazaka an-tanin’olona) ihany koa aza, angamba ny Malagasy, raha vao mahazo fahaizana sy fahalalana eo.
Faharoa, na inona na inona taranja ianarana any an-tsekoly, azo sy afaka atao tsara ny mianatra azy ireny amin’ny tenin’ny tena (teny malagasy ho an’ny Malagasy, teny sinoa ho an’ny Sinoa, teny anglisy ho an’ny Anglisy, sns). Voajanahary izany fa tsy mila kajikajiana amina tetibola. Izany hoe, ny tenin’ny tena (eto, teny malagasy) no hoentina manazava ireo taranja rehetra tafiditra ao anatin’ny fandaharam-pianarana.
Miala hatrany amin’ny ambaratonga ambany ka hatrany amin’ny ambaratonga ambony, azo sy afaka atao tsara ny mampianatra (mampita fahalalana) amin’ny tenin-dreny. Ka maninona tsy io no hampiharina eto Madagasikara fa fanamboaboarana sy fikitikitihan-javatra tsy hitondra mankaiza loatra no maha maika? Mbola ny tombontsoan’ny vahiny ihany ve no arovana amin’ny fampianarana eto Madagasikara ?
Ankoatra ny fanapahan-kevitra fa « manomboka izao, ny tenin-dreny (teny malagasy), no teny hoenti-mampianatra », mila ampifanarahana amin’ny filan’ny Malagasy sy i Madagasikara ary ny zava-misy maneran-tany ihany koa ny taranja ampianarina eto. Asa lehibe mbola miandry ihany koa io. Sa ve sarotra be mihitsy ny manatanteraka izany ? Raha mitafy finiavana sy fitiavan-tanindrazana ary mitsinjo ny taranany ny tsirairay, indrindra fa ny manana fahefana mahefa, vita izany !